DHAGEYSO:- “Waxaan baaq u jeedinaynaa walaalaheena jooga Dhuusamareeb ee Ahlusunna, in wax walbo oo khilaaf ah lagu dhameeyo wada-hadal..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DHAGEYSO:- “Waxaan baaq u jeedinaynaa walaalaheena jooga Dhuusamareeb ee Ahlusunna, in wax walbo oo khilaaf ah lagu dhameeyo wada-hadal..”
Iyadoo dhawaantaan maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ay sheegeen inaysan wax wada-hadal ah marnaba la gali doonin maamulka Galmudug ayaa waxaa arrinkaasi baaq culus ka diray wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa).
Wasiir Odowaa oo haatan ku sugan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa la sheegayaa inuu halkaasi ka wado dadaalo xoogan oo la doonayo in lagu heshiisiiyo maamulada Galmudug iyo Ahlusunna Waljameeca.
Wuxuu wasiirka sheegay in maamulka Ahlusunna Waljameeca looga baahan yahay inay la midoobaan maamulka Galmudug oo haatan fadhigiisu yahay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim ay tahay in dadka ku nool gobolada dhexe danahooda laga fikiro, sidoo kalena isqab-qabsi uusan marnaba keeneynin wax faa’ido ah.
“Waxaan baaq u jeedinaynaa walaalaheena jooga Dhuusamareeb ee Ahlusunna Waljameeca, in wax walbo oo khilaaf ah wadahadal lagu dhameeyo, waxaa walaalaheen diyaar loo yahay in laga qanciyo wax allaale wixii ay tabanayaan, dowladda federaalka anagaa matalna, Galmudugne way joogaan, marka walaalaheen Ahlu-sunna kaalaya oo wada-hadal ogolaada” Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa).
Si kastaba ha ahaatee, hadalka wasiir Odowaa ayaa kusoo beegmaya xilli dhamaadka sanadkaan la filaayo inay dalka ka dhacaan doorashooyin, iyadoo maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ay horey u sheegtay inay doonayaan inay xubno ku yeeshaan Aqalada Baarlamaanka ee haatan lasoo dhisayo.